Bookworm, iyo eBook muverengi iyo bhuku rega rinodya rinofanira kushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Daniel Foré paakagadzira yekutanga OS, chimwe chezvinhu chaaive nacho mupfungwa kugadzira Linux-based operating system yaitaridzika senge macOS. Chero ani akaiyedza anozoona kuti yabudirira: chimiro chayo chiri nyore uye chinoyevedza, chimwe chinhu kune izvo zvinoshandiswa zvakagadzirwa nehurongwa hwekushandisa iyo Pantheon graphical nharaunda yakaita kuti mukurumbira ubatsire. Imwe yeaya mafomu ndeye Bookworm chinoyeuchidza chaizvo maApple Mabhuku ayo kusvika nguva ichangopfuura yaizivikanwa seBooks,
Bookworm ndeye eBook muverengi, asi zvakare ine mabasa emaraibhurari. Izvi zvinoreva kuti kwete chete kuti isu tinogona kuverenga mabhuku emagetsi neapp iyi, asi iwo zvakare achachengetwa nekurairwa sezvaungaona mune iyo skrini inotungamira ino chinyorwa. Kana bhuku riine butiro iro software inogona kuona, zvatichaona zvichaita sekunge taive muchitoro chemabhuku. Kana iyo butiro isipo kana isingakwanise kuwanikwa, Bookworm ichagadzira yakajairika ine musoro webhuku.
Bookworm, kubva kune yekutanga OS kune yako Linux PC
Parizvino, Bookworm iri pane vhezheni v.1.1.2 uye inoenderana neaya mafomati:
Bookworm inotipa ese ekugadzirisa mabasa atinogona kuda, sekushandura saizi yechinyorwa, chinja font (nyangwe kurodha yedu), control line spacing uye margins, annotate kana yerima modhi.
Kana iwe uchifarira kuyiyedza, kune flatpak package en Iyi link and in iyi imwe link pane vhezheni ye openSUSE. Iyo inowanikwawo kubva kune repository:
Mugadziri wayo anoti kushandisa repamusoro apa tinogona kuwana matambudziko ekutsamira, ikozvino kana mune ramangwana, mune iyo kesi iyo yaanokurudzira kuisa yekutanga OS repository nemurairo uyu:
Bookworm isarudzo huru yekuverenga e-mabhuku asi (joke modhi) ine chakakanganisa kukuru: hazvibatsire pakuverenga maLinux Vakapindwa muropa ... kunze kwekunge zvinyorwa zvatumirwa kuPDF, asi izvo zvinenge zvatova zvinyorwa zveimwe chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Bookworm, iyo eBook muverengi iyo bhuku rega rinodya rinofanira kunge rakaiswa